June 2019 – Page2– ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောမြင့်ဦး ၂။ အခြားအမည် – ဦးစောပေါက်ကျိုင်း ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ကကရ(နိုင်)၁၆၄၆၁၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၅ . ၂ . ၁၉၆၅ (၅၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကူးဆိပ်ကျေးရွာ၊ ဖာပွန်မြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ဘူမိဗေဒ)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ကာကွယ်ရေးပညာ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ဗိုလ်မှူးချုပ်(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးသိန်းသိန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်မယ်တင် (ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	181 Views
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	234 Views
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	192 Views
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	202 Views
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	148 Views
Posted on June 25, 2019 December 4, 2019 Author admin	229 Views